Sịntetik mica ntụ ntụ maka ịchọ mma na-ewere sịntetik mica flakes dị ka akụrụngwa, a na-eji nlezianya ahọrọ flakes niile tupu imepụta iji hụ na agba na ịdị n'otu dị n'otu. Ihe sịntetik mica ntụ ntụ maka ịchọ mma na-emepụta site Huajing patented mmiri egweri technology. Enweghị kemịkal na mmetọ na usoro ahụ.
Ihe agba ọcha (Lablọ nyocha) Ngwakọta urù ()m) D50 pH Hg (ppm) Dị ka (ppm) Pb (ppm) CD (ppm) nnukwu ụlọ （%） akụkụ ruru nnukwu njupụta g / cm3 agụụ Ngwa
HC400 acha ọcha Ugbokuta 20 ～ 23 7 ～ 8 .1 .1 .1 .1 ＜ 0,5 150 0.22 Matte na-enwu gbaa Non arọ metal akụrụngwa, High nghọta mkpuchi & whiteness Skin enyi na enyi,
HC800 acha ọcha Ugbokuta 10 ～ 13 7 ～ 8 .1 .1 .1 .1 ＜ 0,5 180 0.14
HC2000 acha ọcha Ugbokuta 5 ～ 7 7 ～ 8 .1 .1 .1 .1 ＜ 0,5 140 0.11
rie nguzogide agba Ike nke Mohs olu resistivity elu mgbochi (Ω) Ebe mgbaze ọkpọ ọkpọ Cha ọcha Ihulata
1100 ℃ Silver 3.6 4.35 x 1013 / Ω.cm 2.85 x 1013 1375 ℃ 12.1 > 92 ≥45
acha ọcha KV / mm R475 Mpa
Sịntetik mica ntụ ntụ maka ịchọ mma na-ewere sịntetik mica flakes dị ka akụrụngwa, a na-eji nlezianya ahọrọ flakes niile tupu imepụta iji hụ na agba na ịdị n'otu dị n'otu. Ihe sịntetik mica ntụ ntụ maka ịchọ mma na-emepụta site Huajing patented mmiri egweri technology. Enweghị mmiri ọgwụ na mmetọ na usoro a .n'ihi iji hụ na kristal ọ bụla nwere nnukwu kristal nwere ike ịkọwapụtakwa ya na mica ntụ ntụ ya na mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe. Uru nke aka ya na - eme ka ngwaahịa ikpeazụ nwee ịcha ọcha na nkwenye dị elu, enweghị ngwongwo dị arọ ma na-emerụ ahụ. Ọ na-eme ka n'aka na ị nwere ike ịgbanwe si kasị kpara ịchọ mma ngwaahịa. Sythetic mica ntụ ntụ dị mma maka sistemụ agba dị iche dị elu, dị ka matte, mercerized na pụta ìhè. Ọ bụ ihe kachasị mma maka ngwaahịa ịchọ mma dị elu.
Njirimara Pụrụ Iche Nwere Ngosiputa Ngwa Mica Powder Nwere?
Wet mica nwere ezigbo nkwụsi ike kemịkal. Wet mica nwere ezi ahụ, acid na alkali na-eguzogide, ịka nká na ịrụ ọrụ nke ọma na ụzarị ọkụ ultraviolet. Mgbe nhicha mmiri, ịdị ọcha ya, ike na-ezobe ya, nchapụta ya, ịdị nro, mgbasa ozi na nrapado dịwanye mma. ọ nwere ike uniformly weere na mmiri na glycerin, na ya udidi bụ ezi na-agbanwe. ọ bụ nke mbụ na klas akụrụngwa nke elu-ọkwa mma ntecha na họọrọ ihe maka ịchọ mma ntọala, na ike ga-eji dị ka emulsion, ude, pearlescent gị n'ụlọnga na ndị ọzọ Efrata.
Mmetụta Pụrụ Iche Na Ọrụ Nke Mica Sịntetik Na Ngosiputa Ngwa
Synthetic fluorophlogopite bụ ụdị ọhụụ dị iche iche nke kristal nke na-eme ka ịnweta mineral nke mica. Ọ bụghị naanị na arụmọrụ nke mica nkịtị, kamakwa nwere ịdị ọcha dị elu na ịdị ọcha dị elu, yana arụmọrụ ya dị elu karịa nke mica. Ihe a bụ nke silicate, lamellar, hexagonal crystal material. Na luster, nwekwara ike n'ime a na-abụghị kenkowaputa udi. Na ihe ịchọ mma, a na-ejikarị ya eme ihe dị ka ihe na-agba agba ka ịbawanye ma gbakwunye ihie nke ihe ịchọ mma, nke ga-eme ka ederede na mmetụ nke anụ ahụ dịkwuo elu. Agaghị etinye obi gị dum na anụ ahụ, n'ihi na mineral agaghị emerụ anụ ahụ ọ bụla, tumadi iji mee ka mmetụta na-egbu maramara nke ịchọ mma.
Production ikike: 150tons / ọnwa
Mbukota: 40KG / 25KG / 20KG, (eyi ma ọ bụ Pee akpa)
Ofzọ nke Transportation: akpa ma ọ bụ nnukwu
Nke gara aga: Pearlescent mica ntụ ntụ
Osote: Eke Muscovite mica ntụ ntụ
Ewute etemeete na Sịntetik Mica
Mica nke Mica Vs Synthetic Mica
Sịntetik Mica Highlighter
Sịntetik Mica mpempe akwụkwọ